Kismaayo News » Xildhibaano tashi u tagay Kismaayo
Xildhibaano tashi u tagay Kismaayo
Kn:Mudanayaal ka tirsan labada aqal ee baarlamanka dalka ee laga soo doortay Jubaland ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo, ayadoo ay garoonka si diiran ugu soo dhaweeyeen xubno ka tirsan baarlamanka iyo wasiirada Jubaland.
Xubnahan oo ay si wadajir ah u hogaaminayeen Madaxweeyne kuxigeenkii hore ee Jubaland hadana ah xubin ka tirsan aqalka sare ee baarlamanka dalka iyo Xildhibaan C/raxmaan Kulmiye Xirsi (C/raxmaan Dheere) oo ka tirsan mudanayaasha aqalka hoose ee dalka ayaa waxay ujeedka imaatinkooda ku sheegeen in ay ahayd tashi ku saabsan isbadallada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo arimaha doorashooyinka gudoonka baarlamanka iyo tan madaxweeynaha ee la filayo in ay goordhow qabsoonto.
Xildhibaan C/raxmaan Dheere ayaa sheegay in mudada ay joogaan magaaalada Kismaayo ay wada tashi la yeelan doonaan bulshada deegaanka iyo maamulka, isagoo xusay in hadaffkoodu yahay in ay ka turjumaan codka iyo rabitaanka bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada laga soo doortay ee Jubaland.
C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamanka dalka ayaa sheegay in ay kulamo la qaadan doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada Jubaland, isagoo intaa ku daray in sidoo kale ay doonayaan in ay booqdaan deegaanadii dhawaan lagala wareegay Al-shabaab ee galbeedka gobolka J/hoose.
Doorashada gudoonka baarlamanka dalka iyo kuxigeennadiisa ayaa la filayaa in ay qabsoonto 11-12 bisha January, ayadoo waqtigaa wixii ka danbeeyo la filayo in diyaargaroow loo galo doorashada madaxweeynaha dalka oo ay musharixiin kala duwan ku loolami doonaan.